डाक्टरहरु हडतालमा, दलहरु निंद्रामा, जनताका समस्या कसले उठाउने ? « Drishti News
डाक्टरहरु हडतालमा, दलहरु निंद्रामा, जनताका समस्या कसले उठाउने ?
Published On : 10 April, 2019
सरकारी डाक्टरहरुले हडताल गरेको बु्धवार(चैत्र २७ गते) ६ दिन पुगेको छ । दैनिक एक लाखको हाराहारीमा उपचारकालागि देश भरीका सरकारी अस्पतालमा जाने सर्वसाधारण जनताले उपचार पाउन सकेका छैनन् ।
तर न त सरकारमा रहेका दलहरुले जनताको पीर व्यथामा गम्भीरतासाथ कदम चालेर समाधान निकालेका छन् । न त प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र अन्य विपक्षी दलहरुले नै चासो देखाएर सरकारलाई समस्या हल गर्न वाध्य वनाउने काममा लागेका छन् ।
सरकारले कानुनको प्रयोग गरेर डाक्टरहरुलाई काममा लगाउन पनि सकेको छैन । न त सरकारले वार्ता गरेर उपयुक्त समाधान निकाल्न नै सकेकोछ । गरीव तथा निम्न मध्यम वर्गको विशाल वहुसंख्याले सेवा लिने सरकारी अस्पतालहरुको यस्तो दर्दनाक स्थिति वनिरहनु सरकारको गैरजिम्मेदार काम हो ।
डाक्टरहरुले पनि विरामी नजाच्ने तरिका भन्दा अन्य तरिका अपनाएर सरकारलाई दवाव दिन सक्नु पर्दछ । डाक्टरहरुले वरु सार्वजनिक स्थानहरुमा विरामीलाइ निशुल्क जाच्ने गरेर सरकारलाई दवाव दिन सक्दथ्यो । यसले जनमत र सहानुभूति डाक्टरहरुको आन्दोलनले पाउने हुन्थ्यो ।
प्रतिपक्ष पनि नालायक सावित भएको छ । देशमा प्रतिपक्ष नै नरहेको जस्तो स्थिति छ । जनताका समस्याहरु सरकारले नहेरेको समयमा प्रतिपक्षले जनताका समस्याहरु समाधानकालागि सरकारलाई विभिन्न तरिकावाट दवाव दिने गर्नु उसको कर्तव्य हो । त्यो कर्तव्यवाट प्रमुख प्रतिपक्ष च्युत भएकोछ ।
नेपालमा अन्य दलहरुपनि छन् । तर उनीहरुले पनि जनताका यस्ता समस्याहरु उठाएर विविध आन्दोलनहरु मार्फत सरकारलाई दवाव दिने र जनताका समस्याहरु समाधान गर्न लगाउने काममा जाँगर चलाउन छोडेको देखिन्छ ।
मधेश केन्द्रित दलहरुलाई मधेशका समस्या मात्रै आफ्ना जस्तो लाग्ने गर्दछ । मोहन विक्रम नेतृत्वको मसाल र मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीले वक्तव्य दिने र चिन्ता जाहेर गर्नेमा सीमित छ ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपा आफ्ना नेता कार्यकर्ता माथि गिरफ्तारी र दमन भएपछि रिहाइकोलागि मात्रै नेपाल वन्द गर्ने गर्दछ, जनताका यस्ता गम्भीर समस्याहरुमा त्यस पार्टीको ध्यान कम गएको हो कि भन्ने देखिन्छ ।
सत्ता वाहिर रहेका कम्युनिष्टहरु मिलेर मोर्चा वनाई जनपक्षीय कामहरु गर्ने र जनताका समस्या समाधान गर्न सरकार र प्रतिपक्ष समेतलाई दवाव दिने गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । तर यसरी सत्ता वाहिर रहेका कम्युनिष्ट पार्टीहरु र अन्य पार्टीहरुको संयुक्त मोर्चा वनाउन पहल कसले गर्ने भन्ने अन्यौल देखिन्छ ।
सत्तापक्षीय पार्टी र संसदिय प्रतिपक्षी पार्टीहरुले जनताका समस्याहरुलाई वेवास्ता गरिरहेको समयमा जनपक्षीय पार्टीहरुको खाँचो वढेको छ ।
अर्थतन्त्रमा संकट चुलिंदै
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नेपालको अर्थतन्त्रको नयाँ रिपोर्टले देशको आर्थिक स्थितिमा संकट चुलिंदै गएको देखाएको
बिजुली बसमा रुपान्तरण हुँदै साझा यातायात
साझा यातायातलाई २०५८ सालमा मृत घोषणा गरिसकेको थियो, तात्कालिन शेरवहादुर देउवाको मन्त्रीपरिषदले । सो मन्त्री
सरकारको असारे आतंक र दक्षिणपन्थी अर्थनीति
सरकारले असार महिनामा अराजक तरिकाले खर्च देखाएर भ्रष्टाचार गर्ने र कमिशन असुल्ने चलनलाई असारे आतंक
कर्मचारीसँग निरीह प्रधानमन्त्री ?
भनिन्छ, जसमा काम गर्ने इच्छा हुँदैन उसले अनेक बहाना गर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको